G'SN THE B THE DB BR B N'etiti HEBHERHE AKA NA BARLEY BEER-News-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
Oge: 2020-06-15 ikwu: 5
Ọka bali siri ike
Ọ bụ biya mmanya zuru oke (otu ọka bekee dum bụ biya biya nke nwere 11 ruo 13 Celsius P) .N'ụ alcoholụ mmanya na-aba n'anya bụ 4.8-5.0% vol. Uto na-adịkarị arọ, dị ka kọfị dị ilu, na malt charred, siri ike.
Ọ bụ biya mmanya gbara ọchịchịrị, a pụkwara ịkpọ ya biya biya (ụdị biya biya dị ọcha, ebe ọka ọcha na-acha ọla edo na ọka wit siri ike), si otú a na-akọwa ụdị biya biya dị iche iche. nke mbụ wort ya dị n'agbata 11 na 14. Ọ alcoholụ alcoholụ ya na-aba n'anya bụ 5.0-6.0% vol (a ga-eme yist n'ime karama ahụ, a ga-ahụkarị yist na ala nke kalama ahụ, na agba ojii). ụdị biya nwere ihe na-esi ísì ụtọ (ya na ọka wit, hops, na mmanụ a -ụ chocolate dị ka ọka wheat), mgbe ụfọdụ ọ na-esonyere ya na-esi ísì ụtọ.
Mgbe ọ na-atọ, mmanya ọka bali kwesịrị ịdị mma ị toụ. Ọka bali nwere mmetụta nke gas bara uru, nri sara mbara ma na-agbaze. O nwere ike inyere mgbaze, mee ka afọ dị jụụ ma gbochie akpịrị ịkpọ nkụ, ma wepụ okpomọkụ.
Ma abia n’ihe oriri na-edozi ahụ, biya ọka bekee na-abawanye uru. Ọka wit bara ụba na stachi, protein karịa, abụba na-enweghị abụba, mineral dị iche iche na vitamin B. biya biya dị ọnụ ala ma dị obere karịa!
Previous: Red Ale (ọka bali)
Ọzọ: ND TIMỌD ON NA BREWERY akụrụngwa MAINTENANCE